Factory ngwaahịa | Ndị na-emepụta ngwaahịa na ndị na-ebubata ngwaahịa - Nkebi nke 3
Tongee ọrụ na-n'ichepụta ụmụ nwanyị na-ewepụta ihe ọkụkụ phototherapy nkpuchi ihu mkpuchi ihu ihu
Tongee ngwa mbufe owu echebe anya ihu ọta na valvụ
Ppe Nchebe megide Uv Plastic Face Shield Mask
Disposable eyi + Pee na-abụghị kpara akwa-acha anụnụ anụnụ akpụkpọ ụkwụ mkpuchi na-abụghị ileghara akpụkpọ ụkwụ mkpuchi
Ngwaahịa ngwaahịa bụ eyi + Pee, na imewe nke oké ọcha na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ teepu na-eme ka uru nke waterproof, ileghara-eguzogide ọgwụ na ájá na-àmà, ma na-ekwusi ya mma. Otu oge eji, adaba na ịdị ọcha, kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ nyocha na ebe ndị ọzọ
Disposable eyi / eyi + Pee na-abụghị kpara akwa ọcha akpụkpọ ụkwụ mkpuchi na-abụghị ileghara akpụkpọ ụkwụ mkpuchi
Elu nwere anụ adịghị edozi, nke nwere ezigbo mgbochi skid na esemokwu na ala. Uwe ahụ nwere mgbanwe, adịghị mfe imebi mgbe a dọtara ya, ọ naghị emebi ala. Isda anaghị ada ụda mgbe ị na-eje ije, a na-atụ aro ịzụta ya mgbe ị na-eleta ogbako ahụ.
High Quality Disposable Civil pp + pe akpụkpọ ụkwụ na-ekpuchi mgbochi skid Non mgbochi skid
Ngwaahịa a bụ ihe mkpuchi akpụkpọ ụkwụ. Ihe nke ngwaahịa a bụ PP + PE, nke nwere ike igbochi nkwụsịtụ, iyi mgbochi, iji otu oge, ịdị ọcha na ịdị ọcha, enwere ike ịhọrọ ọtụtụ agba. Enwere ike iji ya n'ụlọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, na ụlọ nyocha. Ebe ndị ọzọ
Anụ arụmọrụ arụmọrụ okpu uzo panel iche ihu mkpuchi
A na-eji ọta dị elu mechie ọta anyị ihu. Ọ nwere ọrụ nke enweghị nkwarụ ma ọ bụ ike ọgwụgwụ, ụfụfụ ụfụfụ dị nro na mkpuchi mgbochi acetate eriri mkpuchi. Kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ nyocha na ebe ndị ọzọ
Ọdịdị ihu igwe na-acha anụnụ anụnụ nwere elu-igwe, sponge mara mma na isi na-agbanwe nwere ike iji ndị nwere oke isi dị iche iche. High-definition mgbochi foogu ihe onwunwe, doro anya na mbara ọhụụ, adabara ụlọ mmepụta ihe, noo, n'ụlọ nkwakọba na ebe ndị ọzọ